Huawei yatanga kutengesa makomputa neLinux operating system | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi ichangopfuura, kune vazhinji vedu vari kutsikisa yakawanda nhau nezveHuawei. Ruzhinji rwemashoko aya haruuye nekuda kweizvo hofori yeAsia ingade, izvo zvingave nekuda kwekunaka kwazvinoita zvigadzirwa kana kutengesa, asi nekuti VaTrump vakapa veto kambani uye vakatadza kushandisa ramangwana shanduro dzeAmerican zvigadzirwa, senge Android. Asi nhasi tinokuunzira mamwe mashoko akanaka: Huawei atanga kutengesa makomputa eLinux, kunyangwe paine kushoma kudhindwa.
Chinyorwa chidiki uye chinonyanya kuodza moyo panguva iyoyo ndechekuti vari kungozvitengesa muchaina, iyo nyika yakabva Huawei. Vari kutengesa iyo MateBook X Pro, Mate Book 13 y Mate Book 14 en VMall.com, vese pamwe neChina zvakare chinoshanda system yakadzika. Kana iwe usingazvizive, iko kugovera kunobva paDebian ine yazvino vhezheni llegó nenhau dzinonakidza, senge CloudSync iyo ichatibvumidza kusevha masetingi edu mugore kuitira kuti tirege kutanga kubva pakutanga mushure mekuisa iyo inoshanda sisitimu.
Huawei atanga kutengesa makomputa ne deepin
Kugadzirwa neLinux mupfungwa, zvinoshanda zvakakwana zvese neiyo Deepin iyo inouya yakaiswa uye nechero ipi yekuparadzirwa kwepenguin. Zvakare, iyo Windows kiyi (META) haina iyo Microsoft system logo, asi a "Tanga" izvo ini pachezvangu ndaizoda kuva nazvo paAcer yangu. Shanduko iyi yega inotoita makomputa anenge € 38 akadhura. Panyaya yemataurirwo, ese matatu mamodheru anowanikwa aine i5 processor, 8GB ye RAM, uye 512GB yekuchengetedza.
Makomputa aya acharamba ari kuChina here? Hazvizivikanwe. Chinhu chega chakasimbiswa ndechekuti ivo vari kutotengeswa ipapo, asi hazvigone kutongwa kunze kuti vachazosvika kune imwe misika, senge European kana American. Ungade here kuve neimwe yeHuawei itsva MateBook Linux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei yatanga kutengesa makomputa neLinux inoshanda sisitimu
Ndinoshuva kuti dai vakarova masherufu ezvitoro paKisimusi ino.
Zvinotyisa sei MS zvaizowana.
Zvizhinji nekuuraya kwayo kwazvino kwemidziyo pamwe neyakagadziridzwa?
Ini uyo ndakadzokera kumaviri boot pamberi paProton naLutris ndakaita kuti zvisakoshe kutamba, kubva XP kusvika gumi mushure memakore gumi musina MS Windows, kana kuda kushandisa yangu MS WOS 10 izvozvi, fungidzira ndiani asingatozive zvakaitika kwaari zvakafanana, izvo hazvizove zvishoma.
Zvikuru iwe unofanirwa kushandisa simba uye risingaperi kugona kweLinux
Pindura kuna Oxirius
Nekuremekedza kwese kwakakodzera, iwe wakasununguka kubuda. Nehurombo Windows ichaenderera ichinyanya kushandiswa sisitimu inoshanda pasi rese kusvika kumagumo kwePC desktop ...
Asi zvingave zvakanaka kana Huawei malaptop neLinux akasvika ino yeKisimusi, mukuti ndinokupa chaizvo
Chokwadi ndechekuti, nekuti haufanire kunetseka nezvekuenderana uye zvese zvinoitwa, kunyanya ini ndaizoisa opensuse gare gare
Deepin? Iyo distro yakasarudzwa se spyware pane imwe nguva, ndinorangarira ndichiishandisa mushanduro dzayo dzekutanga uye ndakaifarira, kudzamara ndanzwa kumwe kupomedzerwa uku. Inogona kunge iri Debian-based asi mamwe pre-akaunganidzwa mapakeji anogona kunge asiri Debian sosi kodhi. Akapomedzerwa kushandisa rudzi rweGoogle Analytics inonzi CNZZ iyo yaizove nezvimwe zvinangwa pane kungounganidza data rekubhurawuza ... uye hazvisi zvekuti Google iri pachena kana. Chinhu chakanaka nezveLinux ndechekuti iwe unogona kushandura iyo distro yeimwe yaunoda. Chikwata chakanakisa nenzira.